Magnesium Caps | Mega Planet Co., Ltd
Magnesium is one of the body’s most important minerals. In fact, it’s essential for over 300 different biochemical reactions1 in the body.2 Magnesium isamajor factor in relaxing the smooth muscles within the blood vessels, thereby reducing peripheral vascular resistance and promotingahealthy cardiovascular system.3-6 Magnesium also affects circulating levels of norepinephrine and the synthesis of serotonin and nitric oxide.7-9
Other ingredients : vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, stearic acid, silica, citric acid.
Magnesium Capsules အတွင်း သင့်နေ့စဉ်magnesium လိုအပ်ချက်များကို ဆေးတစ်တောင့်တည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် ကွဲပြားသည့် magnesium (၄)မျိုးပါဝင်သည်။ လူအများစုတွင် Magnesium ဓာတ်ချို့တဲ့သည့်အလျောက် နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဒာကိုယ်တွင်လိုအပ်နေသည့် သတ္ထု ဓာတ်များကို လက်ခံရရှိစေနိုင်မည်။
ဇီဝဓာတုဓာတ်ပြုမှု ၃၀၀ကျော်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်
Magnesium ဓာတ်ချို့တဲ့မှုအား ကျယ်ပြန့်စွာ ထိရောက်စေခြင်း
နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးမှ ဇီဝကမ္မစွမ်းအင်အထိ အရာတိုင်းဖြည့်စွက်ပေးခြင်း
နေ့စဉ် 500mg ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ခြင်း
Magnesium သည် ခန္ဒာကိုယ်၏အရေးပါသည့်သတ္ထုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမှန်အားဖြင့် ယင်းသည် ဇီဝဓာတုဓာတ်ပြုမှုအမျိုးပေါင်း (၃၀၀) ကျော်အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ Magnesium သည် အခြားသော သွေးကြောတုန့်ပြန်မှုများကို လျော့ချခြင်းနှင့် ကျန်းမာသည့် နှလုံးသွေးကြောစနစ်ကို မြှင့်တင် ပေးခြင်းဖြင့် သွေးကြောများအကြားရှိ ချောမွေ့သည့် ကြွက်သားစိုင်များကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေနိုင်သည့်အပြင် norepinephrine levels များ၏ လည် ပတ်စီးဆင်းသည့်သက်ရောက်မှုနှင့် serotonin and nitric oxide တို့၏ ထိန်းညှိမှုများအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။
Magnesium သည် အရိုးသတ္ထုဓာတ်နှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်မှုများအတွက်လိုအပ်သည့် ယင်း၏ ဇီဝကမ္မသတ္ထုဓာတ်များအပေါ် ကောင်းမွန်သည့် လွှမ်းမိုးမှုများရှိသည်။ သိပ္ပံစာရွက်စာတမ်းများအရ သတ္ထုဓာတ်လိုအပ်ချက်အချို့တွင် Calcium, Magnesiumတို့ပါဝင်ပြီး ခိုင်ခံ့၍ ကျန်းမာသည့် အရိုးများကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။
ထို့ပြင် Magnesium Capsဖြည့်စွက်မှုမှတစ်ဆင့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းအားတိုးတက်လာစေကြောင်း သက်သေများရှိသည်။ Magnesium သည် insulin ခုခံအား၊ serum lipid လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်ကောင်းကျိုးပြုပြီး ကျန်းမာသည့် ရောင်ရမ်းမှုခုခံအားကိုမြှင့်တင်ပေး၍ ကျန်းမာသည့် endothelial ဆဲလ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပံ့ပိုးပေး၍ oxidative ယိုယွင်းမှုများမှကာကွယ်ပေးသည့်အပြင်အခြားအကျိုးကျေးဇူးများလည်းပေးစွမ်းနိုင်သည်။
နေ့စဉ် (၁)တောင့် ကို (၁)ကြိမ်မှ (၃)ကြိမ်အထိ အစာနှင့်အတူ (သို့) မစားမီ (သို့) ဆရာဝန်ညန်ကြားသည့်အတိုင်းသုံးစွဲရန်။
သတိပြုရန် : အကယ်၍ အမြောက်အမြားမှီဝဲမိလျင် Magnesium သည် အူမကြီးတုန့်ပြန်မှုမြင့်တက်လာစေနိုင်သည်။ ယင်းသို့ဖြစ်ပွားလျင် မှီဝဲမှုကို ခွဲခြား၍ အချိုးအစားလျော့မှီဝဲရန် (သို့) ဤဆေးအား မှီဝဲမှုရပ်ဆိုင်းရန်။
အရွယ်ပမာဏ- သတ်သတ်လွတ် ဆေး(၁)တောင့်
အခြားပါဝင်မှုများ : vegetable cellulose (capsule), microcrystalline cellulose, stearic acid, silica, citric acid.
TRAACS® သည် Albion Laboratories Inc. ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။